STC-usoro Machine Nka na ụzụ Description -Wuxi Daya Technology Co., Ltd.
ST-usoro Nka na ụzụ Nkọwa
STA-usoro Nka na ụzụ Nkọwa
STC-usoro Nka na ụzụ Nkọwa
STE-usoro Nka na ụzụ Nkọwa
C ụba Mechanical Press
C ụba Single crank Mechanical Press (ST usoro)
C Frame Single Crank Mechanical Press (STX usoro)
C ụba Ugboro abụọ Crank Mechanical Press (STC usoro)
Mbadamba Mgbasa ozi siri ike
Solid ụba Single Crank Mechanical Press (STD usoro)
Solid ụba Ugboro abụọ Crank Mechanical Press (Ste usoro)
Nnennen Side Mechanical Press (STF usoro)
Ọkara Emechiela Single crank Press (STB usoro)
C ụba Servo Press (STA usoro)
Nnennen Side Servo Press (Usoro STP)
Akwa Ọsọ Press
C ụba High Speed ​​Press (C usoro)
Nnennen Side High Speed ​​Press
Nnennen Side Five Circle Guide Kọlụm Press (HS usoro)
Nnennen Side Ultra High Speed ​​Press (EL usoro)
Nnennen Side High Speed ​​Press N'ihi Motor stator na rotor (HHD usoro)
Toggle Joint High Speed ​​Press (Usoro ngwa ngwa)
Dadaa Down Speed ​​Speed ​​(HX usoro)
Ngwa igwe nri
3IN 1NC Servo feeder igwe
Ngwa igwe nri Servo
Anọ axis ígwè ọrụ
Anụ axis isii
Ịgbado ọkụ robot
Molybdenum nnukwu efere
Igwe mbuli ekwentị
110 Ton C ụba Ugboro abụọ Point Crank nkenke Press
(Edebere Mechanical Feeds Shaft Na The End End)
1 Ngwa akụrụngwa, aha na oke:
C etiti otu ebe crank nkenke pịa
A na-echekwa ihe oriri na-arụ ọrụ n'ihu n'ihu pịa
2 Ike na gburugburu ebe obibi chọrọ
A-Power voltaji: 380V ± 10%, okpukpu atọ nke waya ise
Pressure Nsogbu ikuku: nrụgide 0.6 ~ 0.8mpa
O okpomọkụ ọrụ: -10 ℃ ~ 50 ℃
⑷ Na-arụ ọrụ iru mmiri: ≤ 85%
3 Akụrụngwa mmejuputa iwu ọkọlọtọ
⑴ GB / T 10924-2009 《Nke ziri ezi nke ogologo akụrụngwa pịa》
⑵ GB / T5226.1-2002 《General oru chọrọ maka ulo oru igwe na eletriki akụrụngwa》
⑶ GB5226.1—2002 《Mechanical nchekwa akụrụngwa akụrụngwa - akụkụ m ọnọdụ ọnọdụ izugbe》
JB / T1829—1997 《General oru ọnọdụ nke ibe ya bụrụ pịa》
⑸ GB17120-1997 《Nchekwa na ọnọdụ teknụzụ nke igwe arụmọrụ》
JB / T9964—1999 《Nka na ụzụ chọrọ nke ogologo n'akụkụ n'ibu pịa》
B JB / T8609-1997 《Ịgbado ọkụ oru ọnọdụ nke ibe ya bụrụ pịa》
3.1 Akụrụngwa ahụ kwekọrọ na ọkwa JIS dị na 1 nke Japanese.
Japan JIS 1 klas
Ewepụghị - Perkpụrụ kwere omume gburugburu ebe ọrụ ala（Mm）
Parallelism - nwere ikike n'etiti etiti ala nke mmịfe ahụ na obere mpempe akwụkwọ ọrụ（Mm）
Verticality nke mmịfe na ala na ala workbench elu - ekwe uru（Mm）
Verticality - nke nwere ike ịnwe ịnwụ shank ka ọ na-amị ala（Mm）
Mwepu zuru oke - ọnụ ahịa nwere ikike nke usoro ọrụ elu na nke ala（Mm）
4 Main akụrụngwa oke
Ngwongwo ihe eji eme ihe na ígwè
Kn / ton
Slide ndu bit structure
Isi ihe abụọ na ụzọ isii
Itinye isi ihe
Ogologo njem njem mmịfe
Oke kachasị modulus
Na-aga n'ihu njem kwa nkeji
Oge / Min
Ogo nke elu workbench (aka ekpe na aka nri x tupu na mgbe)
1400 x 500
Size nke obere workbench (aka ekpe na aka nri x tupu na mgbe)
Isi moto ike + ntụgharị ugboro ole
kW x P
11 x 4 + Frequency ntụgharị
Ọnọdụ ikuku ikuku
Agba nke pịa
Japan JIS larịị 1
5. The oru chọrọ
5.1 Isi bughi atụmatụ na usoro
(1) Elu ugboro quenching nke slide ndu, ekweghị ekwe n'elu HRC45 degrees ，
Uru:eyi nguzogide ka mma nke oma. (enweghị ọgwụgwọ na-agwụ ike na ndị nrụpụta ndị ọzọ)
(2) Ntughari ihe ntughari uzo ndi ozo, ihe ojoo n'etiti Ra0.4-Ra0.8 ，
Uru:jigide oke nkenke, eyi belata nke ukwuu. (enweghị ndị ọzọ na-ehichapụ ma na-egweri nhazi)
(3) Slide okporo ígwè ụgbọ elu 0.01mm / M, oke nkenke.
Uru:ziri ezi na-ukwuu mma. (ndị nrụpụta ndị ọzọ dị n'elu 0.03mm / M)
(4) All anyị gas circuit circuit bụ Japanese SMC.
(5) Anyị na-eji valvụ akpaaka nke MAC nke America, ntụgharị uche jet na-adị elu.
(6) Ihe omuma nke crankshaft bụ 42CrMo (Otu ihe ahụ dị ka AIDA).
Uru:30% siri ike karịa ígwè 45, ogologo ndụ ọrụ. (n'ozuzu 45 ígwè ndị ọzọ na-emepụta)
(7) Aka ọla kọpa bụ zqsn10-1 (tin-phosphorous bronze), nke yiri AIDA ọla kọpa.
Ndị nrụpụta ndị ọzọ na-eji BC6 (a na-akpọ ọla kọpa 663 ọla kọpa), nke bụ 50% siri ike karịa ọla kọpa nkịtị (nrụgide elu) ma na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide. Ogologo ogologo na ndụ ogologo ndụ.
(8) Anyị niile piping bụ Φ 6, mmanụ eruba, adịghị mfe jam. (ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ejikarị Φ 4).
(9) A na-eme tee ahụ nke ika Japan-TM-3 ọla edo (otu ihe ahụ dị ka AIDA)
Advantage: ohere ọnyà na-ata ahụhụ nke ukwuu na-ebelata (onye nrụpụta izugbe bụ iron iron).
Impact Mmetụta gburugburu ebe obibi
Ngwaahịa a enweghị mmetụta na gburugburu ebe obibi ma ọ gaghị emepụta gas na-emerụ ahụ.
Ijikwa na ntinye
⑴gbọ njem na nchekwa nke akụrụngwa:
A-① Akụrụngwa na-ewepu mgbochi nchara, mgbochi vibration na usoro mgbochi mmetụta na usoro nkwakọ ngwaahịa, nke nwere ike ịkwado njem na nchekwa nke 5 ° c ~ 45 ° c.
② Mgbe ebuuru ngwa ọrụ ma chekwaa ya, ekwesịrị itinye uche na ya. Ngwaọrụ na ngwakọ mpụga ekwesighi ikpughe mmiri ozuzo ma ọ bụ mmiri, na mpụga mpụga ekwesịghị imebi.
Mgbe ị na-ebuli ma na-ebudata site na kreenu, ala ma ọ bụ akụkụ nke ngwaahịa ahụ agaghị atụ ụjọ ma ọ bụ ịma jijiji siri ike.
Wepu ma hichaa ihe nkiri plastik a gbanyere na mpụga, wepụ plọg, ma wụnye njikọ PU1 ọkpọkọ na ọkpọkọ PU, ogologo PU pipe bụ ihe dịka 700mm.
5.2 Nhazi akụrụngwa
Akụkụ ọrụ aka
Ejiri welding ihe a Q235B. Mgbe ịgbado ọkụ, a na-eme iwe ọkụ iji wepụ nrụgide nke ihe. Fuselage ndu okporo uzo onodu uzo abuo nke uzo uzo ndu.
Type missiondị mbufe
Nzipu gia, crankshaft na njikọ mkpara na-zukọtara na elu akụkụ nke pịa. Isi igwe arụnyere na azụ e ji atụ elu nke okpokolo agba, flywheel, ipigide, wdg
Na ọnọdụ nke akụkụ azụ nke etiti ahụ, a na-anwale flywheel maka itule tupu nzukọ.
Akụkụ gia na-agbaso usoro nnyefe ezé ziri ezi, yana akụrụngwa ya bụ nnukwu alloy steel 42CrMo, a na-arụkwa ọgwụgwọ ọkụ kwekọrọ.
Akọrọ ala inertia ipigide / breeki. A na-ejikọ usoro nchịkwa ipigide / breeki na ngwaọrụ nchọpụta na-adịghị mma.
A na-eji ihe owuwu na-eguzogide ọla kọpa-phosphorous.
⑶ Ihe mmịfe ahụ
Ihe mmịfe ahụ bụ ihe eji eme HT250. Onye ndu ahụ nakweere ụzọ ntụpọ akụkụ anọ na akụkụ isii,
Ala ala nke slide mgbochi na elu nke okpokoro nwere T-groove, nke a na-eji iji wụnye ebu. A na-edozi elu nke ihe nkwụsị ọkụ site na ọkụ eletrik karịa 80 tọn (gụnyere).
Mụta haịdrọlik akpaka bufee nchedo usoro.
Ub Usoro nhicha
Ejiri mmanu eletrik mee ka ndi akukoa ya ma nwee usoro mkpuchi ala di ala, ya mere odi nma ma nwee ntukwasi obi. Ihe nhazi bụ: ntuziaka butter butter pump.
Idozi usoro ngwaọrụ
Nabata ụdị nrụgide ikuku ikuku slide, enwere ike ịchịkwa nrụgide ikuku na nrụgide ikuku na-achịkwa valvụ.
PLC na-achịkwa akụrụngwa eletriki ahụ, nke nwere arụ ọrụ dị ike nke igwe mmadụ, ma gosipụta ya na ihuenyo mmetụ nke ụdị ndị a ma ama.
Dabere na ogwe ọrụ isi, enwere ike ịrụ ọrụ ndị a:
Screen Ihuenyo mmetụ aka gosipụtara mkpụrụ edemede China (ma ọ bụ gbanwee n'etiti Chinese na Bekee), nke dị mfe ma dịkwa mfe nghọta, na-egosiputa usoro data dị iche iche nke akwụkwọ akụkọ ahụ, dị ka ọnụọgụ strok, kọntaktị CAM electronic, wdg. nwere ike ịtọ site na ihuenyo mmetụ aka;
Gosiputa usoro oru oru nke igwe akuko, ka onye oru ya nwee ike rụọ ọrụ ngwa ngwa，ma isi ya eruba ala ngosi ；
Display Ngosipụta nke arụmọrụ na ọdịda, nke mere na ndị na-arụ ọrụ na ndị na-edozi ya ngwa ngwa iji dozie nsogbu ndị na-ebipụta akụkọ, belata oge;
④ Ihe ntinye PLC ntinye / nziputa nke oma;
⑤ Debe akara ngosi ngwaahịa, nke nwere ike igosipụta ọnụ ọgụgụ ngwaahịa ugbu a na oge, ma setịpụ ọnụọgụ ọrụ nke mpempe akwụkwọ.
A-⑥ Electric control press adopts three-phase power supply, 380V, 50Hz.
Motor The isi moto na-onwem na thermal bufee na efu ọsọ mgbochi mgbanwe nchedo.
⑧ Nghọta nke ọ bụla ọrụ nke ntụmadị akara nwere kwekọrọ ekwekọ yinye yinye. Ejiri mpempe ọkụ na-egosi ihe ngosi na bọtịnụ nrụpụta iji mezue ọrụ nke nrụpụta mgbe nkwenye kpatara.
5.3 Ọnọdụ ọrụ
Press set inching, otu, na-aga n'ihu atọ ọrụ ụdịdị. A na-ahọrọ ọnọdụ ọrụ site na ngbanwe ma na-achịkwa bọtịnụ.
5.4 nchekwa nchekwa
Button Mberede nkwụsịtụ bọtịnụ: pịa bọtịnụ "nkwụsị mberede" ma ọ bụrụ na arụ ọrụ adịghị mma nke pịa. Ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere bọtịnụ nkwụsị mberede atọ.
Otu na ngalaba nchịkwa ọrụ, otu na kọlụm, otu na tebụl aka aka abụọ; Pịa bọtịnụ nkwụsị nkwụsị mberede ọ bụla pịa ga-akwụsị ozugbo. Ọnọdụ nke bọtịnụ nkwụsị mberede na kọlụm bụ ihe dị ka mita 1.2 site na ala, nke na-ezute ihe achọrọ nke ergonomics；
A-button Ime aka abụọ na-arụ ọrụ: bọtịnụ aka mmekọrịta ala na njedebe oge bụ 0.2-0.5s;
A-protection Nchebe buru oke ibu: a na-ejigide ihe eji eme ihe na hydraulic overload system nchedo iji hụ na akwụkwọ akụkọ ahụ agaghị emebi igwe akụkọ ma nwụọ n'ihi oke.
Bufee mgbe ihe mmịfe ahụ na-anọ na ala nwụrụ anwụ, nwere ike iji inching, laghachi azụ n'elu isi nwụrụ anwụ maka ndozi na nrụgide, ọrụ.
6. Nhazi nke akụrụngwa
6.1 Isi bughi akụkụ
Nọmba usoro n'usoro
Akụrụngwa, usoro ọgwụgwọ
Akụrụngwa 42CrMo, kpochapụrụ ma kpoo Hs42 ± 20
Ihe onwunwe 45
Akụrụngwa ZQSn10-1 Tin phosphor ọla
Akụrụngwa 40Cr, Hs40 ± 2 gbanyụrụ ma kpoo ọkụ0
Akụrụngwa QT-500 ọgwụgwọ ọgwụgwọ
Sawtooth obi ụtọ isi
Akụrụngwa HT-250, Igwe na-agwụsị hrc45 ogo dị elu karịa
Ọla kọpa (ọla kọpa)
6.2 Isi akụkụ emeputa / ika
Emeputa / ika
Mkpụrụ mmịfe mmịfe
Etiti agba anọ
Akọrọ ipigide breeki
Valvụ solenoid ugboro abụọ
Kwes agba anọ, inyeaka njikọ
Pressure mbenata valvụ
Hydraulic bufee mgbapụta
Japan ， Showa
Igwe ọkụ eletrik
USA Timken / TWB
Mgbochi ụkwụ ịma jijiji
ikuku mgba ọkụ
ihuenyo mmetụ aka
Multi-ngalaba mgba ọkụ
Mkpụrụ anwụ ọkụ
Edebere nchọpụta nchọpụta na-ezighi ezi
Wiring site na PLC
Ngwaọrụ nchekwa fotoelectric
6.3 Ngwa, ndepụta ngwaọrụ pụrụ iche
Nhọrọ / ọkọlọtọ
Ngwa mmezi na igbe ọrụ
6.4 Ngwaọrụ pụrụ iche (maka nhọrọ) ndepụta
Ngwaọrụ nchọpụta ezighi ezi
Ndabere ngwaọrụ nchọpụta nwụrụ anwụ
Ngwa ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe
Die mpe mpe akwa (ikuku kwushin)
Akwụkwọ Anyị Na-enwe Kwa Izu
Maka onye ọ bụla nke na-eche maka ụlọ ọrụ anyị na ngwa ahịa anyị,
biko kpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ngwa ngwa.
Adreesị:NO.17, Xingzhou Road, Qianzhou Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap